Tsanganana Tokana dia Nahaova Fiainan-dReny Somali Mananon-tena Mananjanaka Valo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Mey 2016 16:43 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, русский, Español, عربي, Swahili, বাংলা, English
Lahatsoratra bilaogy iray dia nanova ny fiainan'ity reny manan-janaka valo ity. Saripika avy amin'ny Somali Faces (Donia sy Mohammed). Nahazoana alalana.
Tamin'ny voalohany Mey, Nataon'ny Somali Faces voaloham-pejy ny tantaran'ny reny Somali mahantra iray izay Olona Mpifindramonina ao amin'ny Fireneny ihany ary mananjanaka valo mbola kely, tsy misy amin'izy ireo no manatrika sekoly.
Mizaka fanitsakitsahana noho ny maha-avy amin'ny foko Somali vitsy an'isa azy sy noho ny hamatroky ny volo-dokiny izy. Efa namisavisa ny hamono tena izy.
Indraindray aho atao vahiny eto amin'ny fireneko, tahaka ny hoe tsy avy eto aho. Reny manano-tena manan-janaka valo aho ary tsy misy mankany an-tsekoly ny zanako. Manadio trano aho rehefa mitrotro ny zaza entiko amin'izao fotoana izao. Mitady ny karazan'asa mety ho hitany rehetra ny ambin'ny zanako. Fantatro fa sarotra ny fiainana ary tsy mora saingy ny mahamafy azy kokoa ary tafahoatra aza indraindray dia ny fomba hanaovan'ny olona ahy sy ny zanako. Matetika aho no mahatsapa ho ao anivon-driakan'olona fo vato. Maro ny manavakavaka ahy satria matroka loatra ny volonkoditro. Milaza azy ireo aho fa izao no nanaovan'Andriamanitra ahy ary tsy afa-manova izany aho. Manositosika ahy ry zareo noho izaho avy amin'ny foko vitsy an'isa na noho ny volonkoditro. Matetika aho no mieritreritra lalina fa tsara kokoa ho anay ny fahafatesana noho ny miaina fadiranovana.
Nihetsim-po tamin'ny tantarany ny mpamaky ary nanomboka nanangom-bola ho azy. Mitentina $4.000 ny vola voaangona tao anatin'ny 21 ora.
Taorian'ny fisian'ny fanomezana, nitatitra ny Somali Faces :
Nanova ny fiainam-pianakaviany ny fanomezana avy aminareo. Noho ianareo dia nanana trano fivarotana azy manokana izy, hamboarina ny tranony ary nilaza taminay izy fa amin'ny vola vidin-katsembohany dia afa-mandoa tsara ny fanabeazana ny zanany izy. Tsy afa-miafina amin'ny tsikiny sy ny hafaliany ianao, indraindray; tsy hitany izay ambara. Tsy namisavisa hahazo vola tahaka izao ao anatin'ny iray tapitrisa taona izy. Vao iray volana izay, noavakavahana izy, very fanantenana sy tsy manankoraisina ary ankehitriny, manana loharanombola mitohy ho an'ny fianakaviany izy. Misaotra ny tsirairay aminareo izahay noho ny fahalalahan-tanana tsy mety mitsahatra ao aminareo sy ny ezaka ataonareo hanovana ny fiainan'ity reny ity. Manome antoka ny Somali Faces fa ny dolara tsirairay nalefanareo dia nalefa hoan'ny fianakaviany ary nandray anjara tamin'ny dingana tsirairay izahay rehefa tonga teo amin'ny fampitaovana sy ny fomba hitantanana ny vola. Tianay ny misaotra ny Tadamun Social Society (TAAS) noho ny fanampiana goavana nataon'izy ireo. Ho arahinay maso ny fandrosoany ary hanolotra anareo lahatsarin'ny fanavaozam-baovao ao anatin'ny 3 ka hatramin'ny 6 volana miainga hatreto amin'ny zavatra ataony sy ny zanany.
Somali Faces dia tetikasa an-tserasera iray mizara ny fiainana andavanandron'ny olontsotra Somali manerana izao tontolo izao. Ny hevitra dia teraka avy amin'ny hevitr'olona anankiroa Donia Jamal Adam, mpilaza tantara, mpanandratra tenin'ny zon'olombelona sy mpanao fanentanana; sy Mohammed Ibrahim Shire, mpanoratra sady mpankafy tantaram-pirenena na tanàna.